Sawirro: Wasiirada arimaha gudaha maamul goboleedyada oo Nairobi shir u jooga
arlaadi May 18, 2017 No Comments
Wasiirada Arrimha Gudaha Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Shir looga hadlayo horumarinta Maamulada kaga qeyb galaya Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kormeeray xarumaha dowladda Kenya, si ay wax badan uga ogaadaan sida ay u shaqeeyaan.
Ujeedka Shirka ayaa ah sidii Wasaaradaha arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedyada ay cashar ka qaataan sida ay u shaqeeyaan hay’adaha Dowladda Kenya sida Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkaas oo u shaqeeya qaab Federaal ah iyo sida loo dhiso maamulada degmooyinka, Waxaana sidoo kale shirkaasi goob joog ka ahaa Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Prof Yaxye Cali Ibraahim.
Xubnaha Shirka ka qeyb galaya ayaa booqday Xafiisyada ay ku shaqeeyaan Hay’adaha Dowladda Kenya kuwaa oo indha indheeyay sida ay u shaqeynayaan, iyadoo faah faahin dheeraad ah laga siiyay sida xafiisyadaasi ay u shaqeeyaan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay safarka ay ku joogaan Kenya in uu yahay mid wax ku ool ah oo uu sheegay in ay wax ka baranayaan sida ay u shaqeeyaan Hay’adaha wadankaasi, waxaana uu tilmaamay wasiirka in u jeedka uu yahay In aan cashar ka qaadano habka ay u shaqeeyaan, wixii aan dabaqi karnana aan dabaqnaa.
Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa sheegay in shirkan uu la xiriiro sidii maamulada lagu fahamsiin lahaa hanaanka ay u wada shaqeynayaan.
Maanta ayaa sidoo kale lagu wadaa Mas’uuliyiintaasi in ay booqdan Xafiiska Madaxweyne Ku Xigeenka Dalka Kenya, Xafiiska Miisaaniyada wadankaasi iyo xarumo kale oo ay ugu kuur galayaan in wax badan ay ka ogaadaan habka ay u shaqeeyaan, waxaana intii halkaasi ay ku sugnaayeen wafdiga soo dhoweyn heer sare ah ay kala kulmaan madaxda wadanka Kenya.